Rajesh Koirala » Blog Archive » मैले यसरी सिकें
हामी तीन दाजुभाइ र पाँच दिदीबहिनी जन्मेका हौं । ठूलो परिवार र मध्यम वर्गीय आर्थिक अवस्थाले गर्दा अध्ययनको काम सोचेजस्तो कसैले गर्न सकेनौं । बुबाआमाले जति सक्नुभयो, त्यति भयो ।
सानो छँदा म राम्रा अक्षर लेख्थे । पढाइमा राम्रो विध्यार्थी थिएँ । एसएलसी दिंदा दोस्रो श्रेणीमा उत्तीर्ण गरे पनि म सबैभन्दा बढी अंक ल्याउने विध्यार्थी हुँ ।
स्कुल पढ्दा उत्तिको पत्रपत्रिका पढ्न पाइन्नथ्यो । मभन्दा पहिले गाउँको स्कुल प्राथमिक विध्यालयमात्र भएकाले दाजूले पढ्न अन्यत्र जानुपर्‍यो । सुरुमा उहाँ सानुबुबा बालकृष्ण पोखरेलसँग मोरङकै उर्लाबारीमा बसेर पढ्नुभयो । पछि सुनसरीको इटहरी जानुभयो र मामाघर बसेर पढ्नुभयो । दाजूले शहर बसेर बढी किताब र पत्रपत्रिका पढ्ने मौका पाउनुभयो । उहाँले ल्याएकै किताब र पत्रपत्रिका म हेर्थे । त्यसैगरी गाउँका पसलहरुमा सामान पोको पार्न ल्याएका बोराभरिका पत्रिका मेरा लागि सामग्री हुन्थे । घरमा भएको रेडियो मेरा लागि सञ्चारको विशेष माध्यम हुन्थ्यो ।
स्कुले पढाइमा उत्तिको धेरै थोक गर्ने अवस्था रहेन । मैले धरान र विराटनगरमा क्रमश: प्रवीणता प्रमाणपत्र र स्नातक तहको पढाइ सके । अनि स्नातकोत्तर (एमए) पढ्न काठमाडौं आएँ । दाजू र ज्वाईं केदार शर्मा नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका संस्थापक हुनुहुन्छ । म उहाँहरुकै निकट रहे ।
वातावरण पत्रकार समूह जाँदा दाजू, ज्वाईं, हेमबहादुर बिष्ट, ओम खड्का, भैरव रिसाल आदि अग्रजहरुले ‘तिमी पनि तालिम लेउ,’ भन्नुहुन्थ्यो । मैले पत्रकारितासम्बन्धी झण्डै एक दर्जन तालिम लिएँ । तालिम प्रिन्ट, रेडियो र टिभी सबैका थिए । उक्त समूहले चलाउने रेडियो कार्यक्रम ‘वातावरण’ मा एक वर्ष काम गरे ।
२०५२ मा हाँस्यकवि अर्जुनप्रसाद पराजुली र व्दारिकाप्रसाद ढकालसँग मिलेर ‘विश्वज्ञान मञ्च’ (म सम्पादक) निकाल्न थालियो । मेहनती स्वभाव, सरल शब्द र छोटा वाक्यको मेरो शैलीले त्यसपछि ‘कान्तिपुर दैनिक’ (हाल वरिष्ठ उपसम्पादक), ‘साथी’ (सम्पादक, बालसाप्ताहिक), ‘सर्वज्ञान मञ्च’ (सम्पादक), ‘नयाँ अटो नेपाल’ (सम्पादक), ‘नौलो प्रतीक’ (बालमासिक पत्रिका, सदस्य-सम्पादक मण्डल) सम्म पुर्‍याएको छ ।
अब के गर्ने ? कुन किताब वा पत्रिका पढ्ने ? आज के गरे ? भोलि के गर्छु ? भनेर सोच्दै, काम गर्दै जाँदा नै अगाडि बढिन्छ । यस्तै प्रश्नले मलाई सिकायो । अहिलेसम्म हिंडाउँदैछ पनि ।
संयोजक, कोपिला (कान्तिपुर दैनिक)
(नेपाल बाल संगठनबाट प्रकाशित नेपालको जेठो बालपत्रिका ‘बालक’ को वर्ष ४४, अंक २, सन् २००८, बाट साभार)
kranti pandey says... on 14-03-2011
sir,maile yo balak mai padeko thiye .ekdam ramro cha.prenadai balyakal ……..pasal ma saman poko parera phaleko patrika padako parsanga le man choyo..
Mia says... on 13-02-2012